कलियुगका कुरा: September 2011
गाउँकाले राहत लिन कहाँ जाने हो ?
मेरो घर नवलपरासीको पहाडी भेग डेढगाउँबाट फोन आयो, 'प्रधानमन्त्री हुने बितिकै बाबुराम भट्टराईले चामलमा ५ रुपैयाँ, चिनीमा ३ रुपैयाँ दालमा कति रुपैयाँ हो, राहत दिने भनेका थिए। तर गाउँका पसलमा भाउ घटेको छैन, सदरमुकाम जान एक/डेड दिन लाग्छ, अनि विकासे मलको भाउ पोहोर भन्दा किलैमा १०/१२ रुपैयाँ धेरै छ। त्यो राहत कहाँ कुन पसलमा पाइन हो बुझ्दिन परो' रे। 'राहतको घोषणा कागजमा र काठमाडौं तथा शहरकालाई मात्र त होइनहोला' भन्दैछन्।
भट्टराईलाई भेट्न पाए दबाब दिनुहोला
राष्ट्रसंघमा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अहिले अमेरिका न्यूयोर्कमा छन्। पहिले पहिले राजाहरु विदेश भ्रमणमा जाँदा त्यो बेलाको शाही नेपाल वायुसेवा निगमको बोइङ जहाज नै लिएर जान्थे। त्यसको कति भाडा अझै पनि वायु सेवा निगमले पाएको छैन। अरु पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु विदेश भ्रमणमा जाँदा जहाजको बिजनेस क्लासमा जान्थे, जसको भाडा सधारणतया इकोनोमी क्लासको भाडा भन्दा दोब्बर हुन्छ। तर यसपटक प्रधानमन्त्री भट्टराईले मितव्ययी यात्रा गर्ने भन्दै इकोनोमी क्लासमा यात्रा गरेका छन्।
दशैं नजिकै आउँदै गर्दा पोहोर साल दशैंको सम्झना आयो। पोहोर दशैंमा विपश्यना शिविरमा जानका लागि नाम लेखाए पनि मेरो नाम प्रतिक्षासूचीमा थियो । महिनाका दुई चोटि हुने अरु बेलाका शिविरमा करिब सय जनामात्र सहभागी हुने भए पनि दशैंका बेला बिदा पर्ने भएकाले शिविरमा जान तीन सय ५० जतिले नाम टिपाएका थिए। शिवपुरीको फेदीमा रहेको शिविरस्थलमा एकपटकमा दुई सय ८० भन्दा धेरैले ध्यान गर्न नमिल्ने रहेछ। प्रतिक्षासूचीमा नाम भएकाले विपश्यना जाने दिन मध्यान्ह १२ बज्नासाथ घरबाट ध्यान केन्द्रको सम्पर्क कार्यालय ज्योतिभवन कान्तिपथ लागेँ ।
'सरकारले भुकम्प किन रोक्न सकेन'
सभासदलाई उडाएको कि साँच्चै भनेको हो ? Kiran Nepal को स्टाटसको एक लाइनले खुब हँसायो आज, सभासदहरुले आजको संसदमा भने रे 'यो सरकारले भुकम्प किन रोक्न सकेन'। (सभासदहरु छन् र हाँस्न पाइएको छ। हाँस्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा....)
भारतीय राजदूतले शिष्टाचार सिकुन्
नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले आफ्ना प्रधानमन्त्रीबाट पनि केही कुरा सिकुन्। मर्यादा, भद्रता र शालिनता कुटनीतिज्ञहरुले जान्नै पर्ने कुरा हो। (फोटो मिलान र शब्द स‍योजन कार्टुनिस्ट राजेश के सी)
पार्टीले कहाँबाट तिर्छ हेलिकप्टर भाडा ?
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पार्टीको काममा हेलिकप्टर चढी गोरखा गएको पैसा सरकारले नदिएर पार्टीले दिने भनेछन्। तर मलाई लागेको, त्यो पैसा पार्टीले चाहिँ कहाँबाट दिन्छ भन्ने हो वा पार्टीलाई कसले पैसा दिन्छ भन्ने हो ?
सर्वाहाराको पार्टीमा लेबी तिर्ने कार्यकर्ता त कति पो छन् होलान् र। भएनै पनि सर्वहारा कार्यकर्ताले दिएको पैसा हेलिकोप्टरमा किन खर्च गर्ने ? भ्याट छल्ने व्यापारी, ढल मिसाएको गुँदपाक-मिठाइ बेच्नेले पार्टीलाई दिएको चन्दाबाट हेलिकोप्टर भाडा तिर्ने हो भने त तिनले घुमाइ फिराई हामीसँग त्यो पैसा उठाउँछन्..
विदेशमा सभासद देख्नासाथ फर्काइदिम्न साथी हो !
अस्ति नै विभिन्न जिल्लामा जस्तै देश बाहिर पनि सभासद पुगे त्यहाँका नेपालीहरु मिलेर ती सभासदलाई 'तुरुन्त देश फर्किहाल्नुहोस र संविधान बनाइहाल्नुहोस्' भनेर दबाब दिने अभियान चलाउने कुरा भाथ्यो। तर विदेशबाट दबाब पाएका कारण कोही सभासद अहिलेसम्म फर्केर आए झैं मानेको छैन। कहिँ पढ्न पनि पाइएको छैन।
भन्ने निषेधित गर्ने चाहिँ खुलमखुल्ला
पोखराबाट जोमसोम उड्नु अगाडि विमानस्थलका भित्ताहरु यताउति हेर्दै थिएँ। पर्यटन बोर्डले प्रकाशन गरेका विभिन्न भावका नेपाल चित्रण गर्ने पोस्टरहरुसँगै यात्रु प्रतिक्षालयको एउटा खम्बामा मुस्ताङमा प्लास्टिक झोला प्रतिवन्धको सूचना पनि थियो।